Ciidanka Liibiya oo falaagada Jan. Haftar ka qabsaday magaalo muhiim ah – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ciidanka Liibiya oo falaagada Jan. Haftar ka qabsaday magaalo muhiim ah
Ciidanka Liibiya oo falaagada Jan. Haftar ka qabsaday magaalo muhiim ah
War ay soo saaraty dowladda Liibiya oo uu taageero caalamka ayaa lagu sheegay in ay falaagada mucaaradka ka qabsatay goobo muhiim ah,waxaana kamid ah magaalada Ghyaryan kadib dagaal xoogan oo halkaasi ka dhacay.
Saraakiisha ciidamada ammaanka dalka Liibiya weli kama hadlin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashey dagaalkaasi oo ay la galeen maleeshiyaadka daacadda u ah Janaraal Khalifa Haftar.
Magaalada lagu magacaabo Gharyan ayna dib u qabsadeen ciidanaka militariga Liibiya ayaa ahayd istaraatiiji muhiim ah,hl;kaasi oo gurmadka saadka ah ay ka heli jireen Janaraal Haftar iyo ciidankiisa,si ay u soo weeraraan caasimadda Liibiya ee Tripoli.
Maleeshiyaadka uu hoggaamiyo Janaraal Khaliifa Haftar ayaa gacanta ku hayay magaalada Ghyaryan tan iyo bishii April ee sanadkan,waxaana ay u suura gashay in duulaano dhowr ah ku soo qaadaan Tripoli.
Wakaaladda Wararka Reuters oo la hadashey dadka deegaanka ayaa soo warisay in ciidanka Liibiya ay weerar lama filaan ah ku qaadeen magaaladaasi Ghyaryan oo ku dhow caasimadda Liibioya,waxaana jira maxaabis laga qabsaday falaagada.
Dhanka kale Afhayeen u hadlay militariga liibiya ayaa Wakaaladda Wararka Faransiiska ee AFO u sheegay in magaalada ay qabsadeen ay ka dhigan tahaya,in awooda ciidanka Janaral Haftar ay sii wiiqmayso.
Khalalaasaha ka taagan dalka Liibiya ayaa cirka isku sii shareeray wixii ka dambeyeey markii xukunka laga riday hoggaamiyihii hore ee dalkaasi Col. Mucamir Alqadafi,sanadka markii ahaa 2011
Previous articleWeerar Saraakiil boolis ah lagu dilay oo ka dhacay Masar
Next articleWafdigii loo xilsaaray baaritaanka dadkii dhawaan lagu dilay Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb oo gaaray Gaalkacyo+Sawiro
Dowlada soomaaliya oo Tacsi udirtay Dowlada ciraaq” iyadoo Tacsi utaalo